Banyere Anyị - Weifang Toption Chemical Industry Co., Ltd.
Weifang Toption Chemical Mmeputa Co., Ltd.
Weifang Toption Chemical Industry Co., Ltd., nke hiwere na 2006 nwere isi ndebanye aha 5millions, ndị ọrụ 150, raara nye kemịkalụ enyi na enyi; bụ professinal emeputa nke Calcium chloride, Barium Chloride, Magnesium Chloride, Sodium Metabisulfite, Sodium Bicarbonate, Sodium Hydrosulfite, Gel Breaker, wdg.
Anyị na-edina na mpaghara mmepe akụ na ụba Binhai, nke bụ nnukwu ihe na-enye mmiri na mmiri na China, dịka nnu mmiri, Soda Ash, Bromine. Ihe omuma ahia ndi ozo na-achota ogo nke ngwa anyi ma belata onu ahia. Ka ngwaahịa anyị nwee asọmpi siri ike n'ụwa. Ka ọ dị ugbu a, ikike kwa afọ nke Sdoium Metabisulphite eruola tọn 150000, na ịdị ọcha dị elu 97% min. Calcium chloride nwere mmepụta kwa afọ 200000, na adịghị enwe adịghị ọcha na azịza doro anya. Dị ka ISO9001, KOSHER na HALAL kwadoro ụlọ ọrụ, ngwaahịa anyị nwere ike iji ụlọ ọrụ nri na-adịghị ize ndụ.
Toptionchem bụkwa ọkachamara na mkpọpu ala mmiri, dị ka Calcium Bromide, Sodium Bromide, Gel Breaker, wdg. N'ime ngwaahịa ndị a, Encapsulated Gel Breaker nwere ikike nke 4000MT kwa afọ na teknụzụ patented. A na-ejikarị ya eme ihe na mmanụ na-akụda mmanụ ụgbọ ala iji belata viscosity nke Guar Gum. Ngwa nyocha ule zuru oke, dị ka Grace M5600, na-emesi obi ike na njikwa dị mma.Can hazie Gel Breaker dị ka ọchịchọ ndị ahịa si dị na ọnọdụ okpomọkụ na oge nkwụsị.
Toptionchem na-etinye aka na nchebe enviromental, na-agbasi mbọ ike ịzụlite okirikiri na akụnụba ike ọhụrụ, iji nweta mmepe na-adigide. Jiri ike oku nke ewepụtara n'oge usoro Sodium Metabisulphite na-emepụta Calcium Chloride na Magnesium Chloride, weghaara Carbon Dioxide ewepụtara iji mepụta Sodium Bicarbonate.
Ndụ ya dị mma ma mepụtara ya na Ebe E Si Nweta ", iji chọọ ebumnuche azụmahịa nke ngwaahịa kachasị mma, arụmọrụ kachasị elu, ọrụ kacha mma, na afọ ojuju kachasị mma.
Mgbe afọ 15 gachara, ụlọ ọrụ ahụ nwetara ISO: 9001 Quality System Certificate, Quality Management System Certificate. N'otu oge ahụ, ngwaahịa anyị enwetawo asambodo Kosher na Halal iji gboo mkpa nke ndị ahịa si mba ofesi nwere nkwenkwe okpukpe dị iche iche. N'inye aka na mmepe nke echiche nke akụ na ụba gburugburu ebe obibi, usoro mmepụta anaghị enwe mmetọ, gọọmentị mpaghara anyị amatala.
Ngwaahịa na-exported ka Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Europe na America, Central na South America, Africa karịrị mba 20 na mpaghara.The àgwà nke anyị na-e ọma natara site mba ọzọ ndị ahịa.
Hydrosulfite, Calcium Bromide Ngwọta, Calcium Bromide Anhydrous, Calcium Bromide mmiri mmiri, Natrium Hydrosulfite, Hydrosulfite De Sodium,